Chelsea oo adduun dhan £71m Atletico Madrid kaga doonaysa Saul | Radio Himilo
Home / Xulka cayaaraha / Chelsea oo adduun dhan £71m Atletico Madrid kaga doonaysa Saul
Chelsea oo adduun dhan £71m Atletico Madrid kaga doonaysa Saul
Posted by: radio himilo in Xulka cayaaraha October 25, 2017	0 52 Views
Muqdisho – Kooxda Chelsea ayaa dooneysa in ay sameyso rikoor kale oo suuqa ah isla markaana ay lasoo wereegto xiddiga kooxda Atletico Madrid, Saul Niguez ayna kusoo xera galiso £71m oo lacagta Ingiriiska ah.
Spanish-kan heerka caalami ayaa dhaliyay kaliya hal gool halka uu mid kalana caawiye ka noqday xagaagan,hayeeshe macalinka kooxda Blues-ka, Antonio Conte ayaa doonaya in uu Niguez qeyb kaga dhigo safka kooxdiisa.
Warbixinta ay qortay Don Balon ayaa lagu sheegay in tababbaraha naadiga Atletico, Diego Simeone uusan qorsheyneyn in uu iibiyo 22-jirkan isla markaana uusan ogoleyn inuu ka tago kooxda.
Niguez ayaa cusbooneysiiyey heshiiska uu ku joogo garoonka Wanda Metropolitano, qandaraaskan ayaana lagu burburin karaa £134m waana mid dhibaato ku abuuri kara kooxda ku ciyaarta Stamford Bridge.
Weeraryahanka kooxda, Alvaro Morata ayaa ku yimid heshiis rikoor ah sanadkan markii uu ka yimid kooxda ay wada xifaal-tamaan Atletico ee Real Madrid, £60m ayuuna ku soo caga-dhigtay London.
Blues-ka ayaa ku dhawaad 200 milyan oo lacagta Ingiriiska ah ku qarash gareysay suuqii kala iibsiga ee soo xirmay, iyada oo la soo wareegtay bartilmaameedyo uu ka mid yahay ciyaaryahankii hore ee Monaco, Tiemoue Bakayoko oo £40m ku yimid Stamford Bridge.
Previous: Sakho: “Wali waxaan rabaa inaan isaga tago West Ham.”
Next: Benitez oo leylin kara xulka Spain kadib shaqadiisa Newcastle United.